Aya ndiwo mamwe emabhuku a2016. Mamwe emabhuku andakawana mukana wekuverengawo mumwaka uyu uyo wandinovimba kuti waiva mwaka wezvinyorwa zvenyaya fupi kunyange kune manovhero akabudawo nguva imwechete iyi. Kune chirevo chinoti kuva Munyori kuverenga zvinyorwa zvavamwe uye iyo simbi inorodzwa neimwe simbi. Vachenjeri vekare vakareva kudaro. Kazhinji unonzwa zvichinzi vanyori vari kutangisa rwendo rwekuva vanyori havadi kuverenga zvinyorwa zvavamwe asi ivo vachida kuva vanyori. Vachenjeri vakare voti kugara nhaka huona dzavamwe. Zvino kana ukasaona kuti vamwe vanonyora sei ungakwanisa kuvamba nzira yakowo here? Zvandifungisa tichiri kukura apo taisvika panguva yekugocha chibage kana kuti zviya kana chibage chaibva. Wainzwa zvichinzi semwana mudiki haugoni kuzvigadzirira nzira yekuenda kwasekuru vako saka munhu mukuru wava muzivi wenzira iyi aibva akuvambira nzira yekuenda kwasekuru vako. Ini semunyori ndinotoravawo zvavamwe zvinyorwa kuti ndiwane pekutsika rwangu rutsoka pasina kutsikwa k…
Zuva ranhasi randifungisa kupera kwemakefiyu kumusha kwedu. Zve randifungisa nguva yakanaka yataiva tichiita apo taipoya kefiyu idzi tichienda kumugidhi kundotamba mutovo kubva richivira pakara kuedze kuti hwe-e. Randifungisazve kuti ndiro gore randakavamba Fomu hwani yangu paDekeza Secondary School apo paingove nemablock evadzidzi vaibvira paFomu yechipiri kusvika kune yechina. Isu tichidzidzira pasi paive pasina zvigaro pamwe nematafura. Taigara pamatanda akapataswa pazvipanda zvemamwe matanda. Chidziro chainyorerwa nevadzidzi chaive chakavakwa namabwe chiri pasi pemuchakata. hazvo takazopedzavo hedu gore topinda mumakirasi. Ndiro gorewo randakabva pachikoro apa kwava kutiza ndichienda kwaRudhanda mushure mekunge ndapesana nemudzidzisi waindidzidzisa Accounts uyo akaronga nemumwe musikana kuti agotaura kuti ndaive ndichikovonera apo taive tichinyora vhunzo dzekotoro yechipiri. Ndakaita hasha zvokutukana nemudzidzisi uyu kusvika tapikirana kuti iye neni hataizova pachikoro ichi kana…